जब केटाले केटालाई नै सिन्दुर हालेर गरे बिहे… पण्डित नै भए आश्चर्यचकित - Ebihani.com
समाचारको शीर्षक पढेपछि तपाईलाई कौतुहल लाग्यो होला । केटा केटाको पनि बिहे ? त्यो पनि नेपालमा ? विदेशमा केटा–केटा वा केटी–केटीबीच बिहे भएकोबारे तपाईले कतै पढ्नु सुन्नु भएकै थियो होला । नेपालमा पहिलोपटक धार्मिक विधि अनुसार केटा केटाको नै बिहे भएको छ । यो समाचार लेख्दै गर्दा बेहुली बनेका केटा आफ्ना केटा श्रीमानको घरमा भित्रिइसकेका छन्।
बिहेमा बेहुलीले साडी चोलो घुम्टो केही लगाएका थिएनन् । बेहुला बेहुली दुवैले कोट, पाइन्ट, चस्मा र तामाङ समुदायले लगाउने टोपी लगाएका थिए । जग्गेमा पण्डितले मन्त्र पढ्दै बिधिपूर्वक उनीहरुको बिहे गराइदिए । सौरभ र सुरज दुबैजना समलिङ्गी हुन्।
Previous सपनालाई भेटेर दिए बधाई अर्थमन्त्री पौडेलले
Next बिहानै पाथिभरा माताको दर्शन गरी हेर्नुहोस् २०७७ मंसिर २० गते शनिबारको राशिफल